Intle ivilla Alladin 1 kunye neAlladin 2
I-Villa Aladin 1 kunye ne-Aladin 2 eyinkimbinkimbi ibekwe ePrivlaka, indawo eyaziwayo ngesithethe sayo sokuloba ixesha elide, kodwa kunye neelwandle ezintle ezinesanti kunye neengqalutye apho unokuchitha khona iintsuku zakho ukonwabela uLwandle oluhle lwe-Adriatic.
I-Villa Aladin 1 kunye ne-Aladin 2 eyinkimbinkimbi ibekwe ePrivlaka, indawo eyaziwayo ngesithethe sayo sokuloba ixesha elide, kodwa kunye neelwandle ezintle ezinesanti kunye neengqalutye apho unokuchitha khona iintsuku zakho ukonwabela uLwandle oluhle lwe-Adriatic. Indawo ekwanti yezi villas ikunika ubumfihlo obupheleleyo, nangona usembindini weDalmatia entle.
Isitayile soyilo esisulungekileyo kunye nesanamhlanje sale villa complex sinokuhlalisa abantu abali-18 ngokukhululekileyo kumagumbi okulala asibhozo. Igumbi ngalinye linegumbi lalo lokuhlambela. Ukusuka kuwo onke amagumbi kumgangatho wokuqala unokonwabela umbono wolwandle kunye ne-Vir Bridge, engekude ne-villa. Kumgangatho ophantsi wazo zombini iivillas kukho igumbi lokulala elinegumbi lokuhlambela, ngelixa amanye amagumbi amathathu kwivilla nganye akumgangatho ophezulu.
Umgangatho ongaphakathi owenziwe ngobunewunewu wezi villas uya kukonwabisa ngekhitshi langoku kunye negumbi lokuhlala eliphangaleleyo elijonge kwintendelezo kunye nechibi. Kukho indlu yangasese eyahlukileyo kumgangatho ophantsi we-villa. Zombini ezi villas zixhotyiswe ngemeko yomoya yangoku, ukuze ukwazi ukuphumla nangaliphi na ixesha kwaye ubaleke ubushushu behlobo obuqhelekileyo bale ndawo.
Izibonelelo zangaphandle ziya kuvuyisa bonke abathandi bokubhukuda kwi-pool efudumeleyo, enomsebenzi we-hydro-massage. Oku kusebenza kuzo zombini iivillas eKomplex. Kwintendelezo ungalungisa izitya ezahlukeneyo kwi-barbecue okanye ngokulula ukutshisa ilanga kwaye uphumle kwizitulo zelanga ngasechibini. I-villa ijikelezwe ngokupheleleyo ngocingo oluphezulu kwaye kukho iindawo zokupaka ezine kwiyadi.
IPrivlaka yindawo esembindini weDalmatia enika imixholo eyahlukeneyo. Ungachitha ixesha uhamba ngebhayisekile okanye ujonge indawo entle engqonge idolophu yaseNin, isiqithi saseVir, iindawo ezinjengeKožino, Petrčane kunye neZaton.
Ungaphuthelwa ukutyelela idolophu yembali yothando yaseNin, eyaziwa ngokuba sisixeko sasebukhosini apho ookumkani bokuqala baseCroatia bathweswa isithsaba. Kule ndawo yentsomi uya kudibana nembali yembali yakudala esahlala ezitalatweni zesixeko. E-Nin kukho neyona cathedral incinci emhlabeni - icawa yaseSt.
Embindini wedolophu, isixeko saseZadar, uya kufumana iindidi ezahlukeneyo zemixholo yasehlotyeni efana nokuloba ngokuhlwa okanye iminyhadala yesitrato. NjengoNin, iZadar ibonelela ngezinto ezahlukeneyo zenkcubeko nezembali ukusuka kumaxesha amandulo. Ungaphoswa ukutyelela iforamu yaseRoma kwiziseko apho icawa yamaRomanesque yaseSt Donat yakhiwa kamva kwinkulungwane ye-9.
Kungakhathaliseki ukuba loluphi ulwalathiso olukhethayo, unokuqiniseka ukuba wenza isigqibo esifanelekileyo. Iilwandle ezinodaka lokuphilisa, idolophu endala enezikhumbuzo ezininzi zenkcubeko okanye iminyhadala eyahlukeneyo yentlalo? Yonke into ilungile apha, ePrivlaka okanye kwindawo ekufutshane. Okufuneka ukwenze kukufika uzonwabele iholide yakho.